Zvizvarwa zveZmbabwe kuFlorida neMamwe Matunhu muAmerica Zvosangana neDambudziko reDutumupengo Irma – 263AfricaNews-Patrick_Manase
September 7, 2017 c263afri 0 Comments
Mamwe matunhu muAmerica akaita seFlorida, Georgia neNorth Carolina anonzi anogona kuwirwa nedambudziko guru redutumupengo remvura nemhepo riri kuzivikanwa nekuti Hurricane Irma.
Kunzvimbo idzi kune zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinoti zviri kugara zvakagadzirira sezvo vakuru vemakanzuru nehurumende vari kuti vanhu vanogona kuudzwa chero nguva kuti vatize mudzimba dzavo kuti vasarasikirwe nehupenyu.
Dutumupengo idzva riri kutarisirwa iri ririkuuya apo rimwe rinonzi Hurricane Harvey risati ranyatsopera. Dutumupengo iri rakarova ku matunhu eTexas neLousiana.
Dutumupengo reIrma rakavhuvhuta muzvitsuwa zveBermuda, St. Martin neBritish Virgin Islands uye rinonziwo rakatouraya vanhu vasere.
Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinoti dziri kutarisirwa kusvika mu Florida nemusi weMugovera kana weSvondo. Vanhu vazhinji vanonzi vari kusiya misha yavo mu Florida vachienda kune dzimwe nzvimbo.
VaPromise Sande, chizvarwa cheZimbabwe chine mabhizimusi muguta reOrlando kuFlorida, vanoti vanhu vari mubishi rekugadzirira kuti vasavhiringwa nedutumupengo iri.
“Vari kuti ivo dutumupengo iri rinotarisirwa kusvika ku Miami, muno muFlorida, nemusi weSaturday rozosvikawo kunzvimbo dzakaita sanaOrlando, pamwe nemusi weSvondo.”
Vanoenderera mberi vachiti, “Kutaura kwatirikuita izvozvi tinotori panguva yekumanya manya tichivhara dzimba nemapuranga aye anonzi ma’boards’ kuitira kuti dzimba dzisakuvadzwa zvakanyanya,” vaSande vakaudza Studio 7, vachipamidzirazve vachiti, “Chinowanzokuvadza nzimba panguva yedutumupengo idutu remhepo rinenge richipinda mumba richipwanya mahwindo.”
VaSande vakati zvizvarwa zveZimbabwe zviri muFlorida zvakati wandei asi vanetarisiro yekuti zvinhu zvese zvichafamba hazvo zvakanaka.
← Vatori veNhau Voyemura Mashandiro Akaita Vamwe Vavo Musarudzo Dzakaitwa kuKenya
Chiredzi’s Chigarapasi bar finally opens →
February 22, 2017 c263afri 0
Britain Inopa Mari yeChikafu kuNyika dzeKuchamhembe kweAfrica
Vana Chiremba veHurumende Voronga Kuramwa Mabasa Kutanga neChitatu
February 13, 2017 c263afri 0